Deeq raashin ah oo ka tmid dalka Cumaan oo la gaarsiiyay Labo kun qoys oo kamida danyarta Gaalkacyo – Radio Muqdisho
Maamulka Gobolka Mudug iyo Kan Degmada Gaalkacyo ayaa maanta ka qaybgalay gurmad raashin loogu talagalay afurka bisha Ramadaan loogu qaybinayay labo kun qoys oo kamida dadka danyarta ah ee ku dhaqan kaamamka ku yaala degmada Galkacyo.
Gurmadkan oo ahaa mid ka yimid dalka Cumaan oo ay fulinaysay hay’adda gar gaarka Cumaan ayaa waxaa ka hadlay oo ka hambaliyeeyay Gudoomiyaha Degmada Gaalkacyo ee Puntland Maxamuud Yaasiin Tummey.
Xasan Maxamed Khaliif oo ah Gudoomiyaha Gobolka Mudug ayaa sheegay in Dowlada Cumaan iyo usldaan khaamuus ay sanad walba ka qaybqaataan caawinta danyarta somaliyeed.
Ugu dambayn waxaa munaasaada ka hadlay Wakiilka Hay’ada Samafalka Cumaan ee Gurmadkan soo gaarsiiyay danyarta ku dhaqan Gobolka Mudug.
Deeqdan loogu talagay afurinta danyarata Gobolka Mudug ee ka timid dalka Cumaan ayaa la gaarsiin doonaan qaybo badan oo ka mdi ah Gobolka